' ဟာဇတ် ရဲ့ နေရာ ကို ဖြည့်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အကြီးအကျယ် ငွေသုံးဖို့ လိုခဲ့ပါတယ် ' - လမ်းပတ် - SPORTS MYANMAR
ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ် က ဖီဖာမှ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်း တရပ် ကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့လို့ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ အတွက် ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူခွင့် အပိတ်ခံခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်တဲ့ အီဒင် ဟာဇတ် ကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းထံသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း ၁၀၀ နဲ့ ထွက်ခွာခွင့် ပေးခဲ့ရပါတယ် ။
ကံကောင်းချင်တော့ ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ မော်ရစ်ဇီယို ဆာရီ ထွက်ခွာသွားလို့ လစ်လပ်နေတဲ့ နည်းပြ ရာထူး နေရာမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ ဂန္တဝင် ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဖရန့် လမ်းပတ် ကို အစားထိုး ခန့်အပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ လမ်းပတ် ဟာ ငွေတပြားတချပ် မှ သုံးခွင့် မရှိခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်း ကို အကယ်ဒမီထွက် ကစားသမားတွေနဲ့ အလှပဆုံး အစားထိုး ပြင်ဆင်ပေးသွားခဲ့ပါတယ် ။
ရာသီအကုန်မှာ အဆင့် ၄ နေရာနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် တနေရာ ကို ရယူခဲ့အပြီးမှာတော့ ၊ ယခုနှစ် ရာသီ အတွက် ကစားသမားသစ် ဖြည့်တင်းမှုတွေ ဝုန်းဒိုင်းကျဲ လုပ်ခဲ့ပြီး ၊ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း ၂၂၀ ကျော် သုံးစွဲကာ ၊ တိုက်စစ် နဲ့ ခံစစ်ပိုင်း အတွက် ထိပ်တန်း ကစားသမားသစ် ၇ဦး အထိ ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ် ။
ဒီအထဲမှာ လစ်လပ်သွားတဲ့ အီဒင် ဟာဇတ် ရဲ့ နေရာ ကို ဖြည့်တင်းဖို့ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ အေဂျက်ဇ် ၊ လစ်ပ်ဇစ် ၊ လေဗာကူဆင် အသင်းတွေက အကောင်းဆုံး တိုက်စစ် ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဟာကင် ဇီယက်ချ် ၊ တီမို ဗာနာ ၊ ကိုင်ဟာဗက်ဇ် တို့ကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ် ။
ဖရန့် လမ်းပတ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဟာဇတ် နေရာ ကို ဖြည့်တင်းဖို့ အတွက် တကယ်ပဲ ကြီးကြီးမားမား သုံးစွဲဖို့ လိုအပ်ခဲ့တယ် လို့ ခံစားရကြောင်းကို မနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တရပ် မှာ
” ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီတုန်းက ကျွန်တော်တို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် အကောင်းဆုံး ကစားသမား ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် လို့ ခံယူထားပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ဟာ သူ့နေရာကို ဖြည့်တင်းဖို့ ချက်ချင်း အလုပ်လုပ်ခွင့်လည်း မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ဒီတော့ မနှစ်က တလျှောက်လုံး အသင်းလိုက် ကွင်းတွင်း စွမ်းဆောင်ရည် အပိုင်း အတွက်ပဲ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ် ။ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေဟာ ထိပ်ဆုံး ၆ နေရာ အတွက် ပိုမို ပြိုင်ဆိုင်လာကြပါတယ် ။ “
” အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်း သူတို့တွေဟာ မနှစ်တုန်းက ငွေသုံးကြမ်းခဲ့ကြသလို ၊ ဒီနှစ်လည်း အသုံးအစွဲ လျော့မသွားပါဘူး ။ သူတို့တွေကတော့ လိုချင်တဲ့ ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူ အားဖြည့်အပြီးမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံ ကို ချက်ချင်း ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ “
” အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရထားတဲ့ ကစားသမား အင်အား နဲ့ တောင့်တင်းတဲ့ ခေါ်ယူမှုတွေ လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ့်အထက်က အသင်းတွေကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီလို အချိန် အတိုင်းအတာ တခု အထိ ယူပြီး ခိုင်မြဲ တောင့်တင်းအောင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ အသင်းတွေကို ကျွန်တော် တို့ အတုယူနေရပါတယ် ။ “
” အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခေါ်ထားတဲ့ ကစားသမားသစ်တွေနဲ့ တောင့်တင်းတဲ့ အသင်း တသင်း ကို တည်ဆောက်ချင်နေပါပြီ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ၊ အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက် ၂ခုလုံး ကို လွဲချော်ခဲ့ပြီးနောက် ၊ ဒီရာသီ မှာ ကျွန်တော် တို့ဖက်က မြင်ထားတဲ့ တိုးတက်လိုတဲ့ ပုံစံ တခု အတွက် ကစားသမားသစ် တွေကို ဖြည့်တင်းထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဆက်လက်ပြီး လမ်းပတ် က လက်ရှိ သုံးစွဲထားတဲ့ ငွေကြေး ပမာဏ ရဲ့ ဖိအားကြောင့် သူ နစ်မြုပ်သွားမှာ မဟုတ်ကြောင်းကို ” ဒါဟာ ဘောလုံး လောက ဖြစ်လို့ ၊ ဖိအားဒဏ် ကို ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် ။ ရှေ့ဆက် တိုးတက်ဖို့ အတွက်က အချိန်လည်း လိုပါတယ် ။ “
” ဒါပေမယ့် လိုချင်တဲ့ နေရာကို အမြန်ဆုံး ရောက်ဖို့ အတွက် က ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှု က အဓိက ကျပါတယ် ။ အများရဲ့ ကျွန်တော်တို့ အသင်း အပေါ် ကြီးကြီးမားမား မျှော်လင့်ချက် ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာ ပြဿနာ မှ မရှိသင့်ပါဘူး ။ “
” ချဲလ်ဆီး လို အသင်းကို ဖိအား မရှိပဲ ဘာလို့ ကိုင်တွယ်နေမှာလဲ ? မျှော်လင့်ချက်တွေ ၊ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်တွေ မရှိပဲ ချဲလ်ဆီး လို အသင်းမှာ ဘာလို့ မန်နေဂျာ လာလုပ်မှာလဲ ၊ လာကစားမှာလဲ ? ဒါဟာ လုံးဝ အဓိပ္ပာယ် မရှိပါဘူး ။ မျှော်လင့်ချက် တွေကို ကျွန်တော် လက်ကမ်း ကြိုဆိုပါတယ် ။ “
” ဖိအားတွေကိုတော့ ဘေးဖယ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ကြိုးစားမှုတွေကို မရပ်တန့်ပဲနဲ့ ကိုယ် လိုချင်တဲ့ ပစ်မှတ် ၊ အောင်မြင်မှုတွေ အတွက် ဆက်လက် အသက်သွင်းရမှာပါ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။